Ngaba iNkampani ifanele ingene nini kwiMithombo yeendaba? | Martech Zone
Inkampani kufuneka ingene nini kumajelo eendaba ezentlalo?
NgoMvulo, Agasti 18, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Uninzi lwencoko yethu kwiBhlog yoShishino lweBlogIND iseshoni yeINDIANA yayi nini inkampani kufuneka ingene kwimidiya yoluntu, njani Kuya kufuneka bangene kwimithombo yeendaba zentlalo, kwaye kufuneka kanjani lawula igama labo kwi-Intanethi. Kwiposti yanamhlanje, ndiza kuthatha umbuzo nini.
Abantu abaninzi baya kuthi, namhlanje! Ngoku! Izolo! Andiyi. Ndicebisa ukuba amajelo asekuhlaleni kunye nokubhloga ayisosicwangciso sokuthengisa, sisicwangciso sobuchule. Ayikokuzibeka ngokwakho kwintengiso ukuya tsiba kwi-bandwagon yamva nje kwaye abathengi baya kugxalathelana ukuza kuwe. Imidiya yoluntu ithatha ixesha, isicwangciso kunye nezixhobo ezifanelekileyo (zombini izixhobo kunye nabantu).
Ifoto esuka Zonke iiPosta.
Imidiya yokuncokola ifuna inqanaba lokungafihlisi kunye nokunyaniseka uninzi lweenkampani ezingonelisekanga kuko. Iinkampani aziphenduli kubathengi kuphela-baphendula kukhuphiswano, kumzi-mveliso, kubanini zabelo, kubasebenzi nakwithemba. Ngamanye amagama, amajelo eendaba ezentlalo anokuchaphazela onke amasebe kwinkampani yakho nakubasebenzi kuwo onke amanqanaba. Kufuneka uzilungiselele.
Ukuba ucinga ukuba uza kuphumelela ngokulahla ibhlog ye-WordPress, uphosakele. Uzibeka emngciphekweni wokungena kwi-intanethi ehlazo apho uya kuba nexesha elinzima lokumba ngaphandle kokuba ungakhange ungene kwiinzwane zakho konke konke. Nxibelelana nengcali yeendaba ezentlalo eziqondayo izixhobo ezahlukeneyo kwintengiso kunye nendlela onokuthi uzuze ngayo kulowo nalowo okanye kwindibaniselwano yazo zonke.
Kuya kufuneka ubandakanye zonke iinkokheli kwinkampani yakho- abo siqu Isicwangciso sobumbano. Ukuba awunakho kokubini ukuqonda kunye nokuthenga ngaphakathi kwitsheyini, ulungelelwaniso kuwo onke amanye amajelo luya kudodobala. Ukubeka Ukuthengisa ophethe isicwangciso sakho seendaba zentlalo Uhambisa izitshixo kwigumbi lebhodi kubo-abanokuyibona impembelelo kwintengiso, inkxaso kubathengi, ukwaneliseka kwabaxumi, ukoneliseka kwabanini zabelo, njl.
Ndiza kuyithetha kwakhona, umngcipheko wokungena kweshishini kwimithombo yeendaba zentlalo kwaye ukusilela kubi kunokuba ungangeni kwaphela.
Ngaba oku kuthetha ukuba inkampani akufuneki ingene kwimithombo yeendaba zentlalo?
Hayi… kodwa ndiyakholelwa ukuba yiyo le nto kubekho ukwamkelwa kancinci I-pacts ezikwi-Intanethi kunye nezivumelwano ezinje ngePact Customer Pact. Ngaba ababhali beli phepha bayaqonda ukuba ezinye iinkampani azinakho ukutyikitya isivumelwano esinjengalesi?
Kuyothusa kwaye kuyandikhumbuza uninzi lwezopolitiko ngaphandle kwendlela ngoku - bathembisa yonke into ephantsi kwelanga ngezixhobo ezincinci zokuhambisa. Inyani yile yokuba uninzi lweenkampani azinakho ukubonelela ngesivumelwano ngolu hlobo! Ngokwam, ndingayithanda inkampani yam ukuba ityikitye isivumelwano - kodwa ndiyazi ukuba abanini zabelo kunye nobunkokeli bayayichitha.
Inkampani yam ayikubeki ukubeka ukukhutshwa kweendaba kumanqaku owaphula umhlaba ngenxa yokoyika ukhuphiswano oluyibambayo. Imida yethu iqinile, abathengi bethu abancinci, kwaye ukhuphiswano luyoyikeka. Ukulibaziseka ekubeni opaque ingasinika umda esifuna ukumbamba umxhasi omkhulu olandelayo ngaphambi kokuba ukhuphiswano lwenze. Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Andizithengi ngokupheleleyo esi sicwangciso kodwa ndiyawahlonipha amava ebhodi eqhuba inkampani yethu. Emva kwayo yonke loo nto, yimali yabo esingcakaza nayo.
Kwelinye icala, umngcipheko wokungatshintshi kumajelo asekuhlaleni kukuba ukhuphiswano lwakho okanye akho abathengi abonelisekanga (okanye okubi kakhulu… abasebenzi)! Kukho imizekelo emnandi yeenkampani ezi kuthintele uhlaselo lokugxekwa by besusa iingubo zabo zemfihlo kwaye utsibe ngaphandle kulwa.
Okokugqibela, ndiyakholelwa (ndiyathemba) zonke iinkampani ziya kutyhilwa ukuze zilungelelane nezivumelwano ezinje ngeNkampani yoMthengi. Ndiyazi nje ukuba kwiinkampani ezininzi, ayisiyiyo namhlanje.
Qhubeka kwiCandelo 2 le-3!
tags: kwimidiya yoluntuishishini kwimidiya yoluntuImidiya yokuncokola
Amanyathelo ama-3 okukhusela ibhlog yakho kwi-Big, Fat Lawsuit
Agasti 20, 2008 kwi-9: 49 AM
I-100% iyavumelana ngokubhekisele kwi-buyin ebanzi, ngakumbi kumanqanaba aphezulu, kwaye iyafana nexabiso lokusilela. Kuthatha itoni yenkcitho ye-PR ukulungisa ukungaphumeleli kwesiqingatha sokungena kwimithombo yeendaba zentlalo, kwaye ukuba imiba yokusombulula ebangele ayinakulungiswa, iya kuphinda ikwenye indlela ezantsi kwendlela. Kwelinye icala, ukufumana oko kuthengwa, kwinto enexabiso eliphantsi lokungena, kunye nokubonakala kokudibana okuphantsi kunokuba nzima kakhulu. Kuza kubonakala nje kwi-radar, kwaye ngelixa ukuqhubeka kunokwenzeka, ayisiyontliziyo kunye nengqondo yokutshintsha kweparadigm nangayiphi na indlela. Ubuncinci akuyi kubakho, de kube yinto entle kakhulu, okanye into embi eyenzekayo.
Ukuya kuthi ga ngoku kwinkampani yenkampani yomthengi ... amagqwetha aya kuba nosuku lwentsimi kunye noko. Ngaba unokucinga ukuba umnxeba wefowuni, inkampani yeinshurensi, itekhnoloji ephezulu, okanye umenzi ophakathi ubungakanani evuma loo migaqo, ethatha ukuba bayayiqonda imilinganiselo enjalo, kwaye ayisiyiyo nje into elungileyo yokwenza into? Inezinto ezininzi ezinokubakho kwithiyori… kodwa ithathwa ngokoqobo, thetha ngento enkulu kummeli wabamangali, okhuphisana naye, zombini ulwazi lweqhinga, kodwa nokugaya, kwanabaqeshi ngokubanzi.
Isivumelwano senkampani yabathengi ayisiyonto imbi, kodwa iziphumo ebezingalindelekanga zibalulekile, ngaphandle kokuba yinkonzo yomlomo kuphela yento yohlobo.